Sukutyhafa ngamajelo eendaba | Martech Zone
NgoLwesine, Agasti 11, 2011 NgoLwesihlanu, Agasti 12, 2011 Douglas Karr
Omnye wabantu endiphuma kubo ukuva ukuthetha nguJay Baer. Ngale ntsasa kuye kwafuneka ndivuke ngaphambi kokuba ilanga liqhube ukuya kulo IBlogIndiana ukuva intetho yakhe ephambili- kwaye belulungele uhambo. Kukho izizathu ezimbalwa. UJay uneminyaka engama-20 yamava njengomthengisi kwaye akoyiki ukuthetha uluvo lwakhe. UJay ungumntu wokwenene- akukho mahluko phakathi kwalowo umbonayo eqongeni nalowo udibana naye ngobuqu. Kananjalo, emva kokubona uJay ethetha amatyeli alishumi elinambini, khange ndibone ntetho-nye inye kabini.
Ndandikhala kuJay ukuba ndinomdla wokuba ezinye iiblogi zazincinci kuneyam zifumana iimpendulo, ukuthanda kunye nokukhankanywa. Ndide ndizibuze, mhlawumbi, ukuba abanye abantu bebelidlala eli shishini. UJay khange acinge ukuba babekhona- ufumana itoni yeempendulo kunye nokwabelana kwezentlalo kwibhlog yakhe, Qinisekisa kunye nokuguqula (kufuneka ufunde!).
Andikholelwa ukuba umgangatho wezithuba uza kuba ngumba-sihlonitshwe kakhulu kwishishini lokuthengisa. Mna noJay saxoxa ngobungakanani bezithuthi endandizifumana kwaye, xa kuthelekiswa, ibhlog yakhe ifumana ukufundwa okufanayo. Nangona kunjalo, abafundi bakhe banoburharha ukwabelana ulwazi olubekwa nguJay. Akukho sixa sincinci - isixa esikhulu… umndilili weetweets ezingama-200 ngeposi!
Kwikona kaJay ngumxholo wakhe omangalisayo, ubuchule bakhe ekunxibelelaneni neenethiwekhi, kunye nokuqhubeka nokuthetha. Unayo enkulu kakhulu elandelayo kuTwitter nakuFacebook kunathi. Kuyo yonke indawo, uJay yimigca embalwa ngaphezulu kwenqanaba lam. Ukuba ndingukaputeni, ungumphathi-mkhosi. Ndimhlonipha kakhulu.
Ngokuthetha oku, kuye kwacaca ukuba abantu abalandela uJay banentlalontle ngokunegunya elikhulu. Abantu abalandela uJay bakwizinga eliphezulu nabo! Uninzi lwabalandeli bakaJay banabalandeli abalandelayo bebodwa- kwaye bayathanda ukwabelana nenethiwekhi. Lo ngumahluko phakathi kwabaphulaphuli bam noJay. Ndiyiloluhlobo lwamantongomane kunye neebhanti ezilwa nazo kunye nabathengisi emiseleni. Nangona sitsala abantu kuwo onke amanqanaba emfundo kunye nobukhulu kumashishini… yibhlog malunga nokuthengisa.
UJay unebhlog malunga nokuthengisa ngokunjalo, kodwa ujolise ngakumbi kwaye waphuculwa kwindawo yemidiya yoluntu kunam. Sisike indawo ebanzi… nayo yonke into isuka kubahlalutyi ukuthengisa nge-imeyile. Abaphulaphuli endibafikayo bayabandakanyeka, kodwa abanabungqina bokwabelana okanye ukukhuthaza umxholo endiwubhalayo. Uninzi lwabafundi bam alusebenzi kwaphela kwimidiya yoluntu, egxile ngakumbi kwintengiso yohlobo kunye nentengiso.
Nantsi ingongoma yam. Ndandinamehlo amfitshane njengoko ndandisenza isandi ngokusebenza komxholo wam. Akufuneki ndidimazeke kwaphela-kuya kufuneka ndikhuthazwe ukuba ndithetha neqela labafundi ababandakanyekayo abangakhange bangene kwimithombo yeendaba zosasazo okwangoku. Ndiyathemba ukuba ndingabanceda bafike apho, kodwa isenokungabi namhlanje okanye ngomso, isenokuba yiminyaka kude. Inethiwekhi yakho iya kufana, ngakumbi ukuba awukho kumashishini akwi-Intanethi. Musa ukudimazeka njengoko ubhala itoni yomxholo omkhulu kodwa kwabelwana kuphela ngabantu abambalwa. Asinguye wonke umntu onentlalontle njengathi.
Imigaqo-nkqubo yeendaba zosasazo emsebenzini
Agasti 12, 2011 ngo-5: 30 PM
Enkosi. Andifanelanga nantoni na, kodwa enkosi.
Andizange ndiwaqhube amanani kule nto ngokuqinisekileyo, kwaye ndiqinisekile ukuba kukho abathengisi, kodwa ndiyakholelwa ukuba iyinyani ngokungagungqiyo. Into endiyixelela abathengi bam ababhlogayo kukuba umxholo wakho uphantsi, kokukhona kunokwenzeka ukuba ukhuthaze ukwabelana kunye nokuziphatha okubhalisileyo, kuba kusenokwenzeka ukuba umfundi uziva ngathi uthetha ngokuthe ngqo malunga nemeko yabo. Urhwebo luyindlela.
Banzi = iindwendwe ezininzi, ukwabelana kancinci + kunye nemirhumo
Imxinwa = bambalwa abatyeleli, ukwabelana ngakumbi + kunye nemirhumo
Damn, ngoku kuya kufuneka ndibhale iposti yebhlogi malunga noku! Enkosi ngesiqhulo DK. Kuhle ukukubona njengamaxesha onke!
Agasti 12, 2011 ngo-5: 55 PM
Ngokuqinisekileyo iyavakala, Jay! Ndijonge phambili kwisithuba. Masikhe sifumane iMezcal Blanco kungekudala.
Agasti 15, 2011 ngo-4: 40 PM
I-Twitter ihlala iyindawo yokudlala ye-"twitterati" yengqondo kunye nentlalo. Ndilandela ngaphezulu kwekhulu abantu kwintengiso / kwezentlalo / kwindawo yeetekhnoloji yodwa, kwaye kunokuba yinto enzima ukucubungula lonke ulwazi. Uninzi lomxholo ofumana i-retweeted uvela kwi-subset encinci. Thetha ngokudityaniswa, ungathini xa usithiya igama kwakhona. Inye into endinokuyixelela uDick Costolo kuTwitter yile: “Yiya kuTwitter phaya ebantwini, iigunions ezininzi ezingahlanjwanga, ndinike abasebenzisi be-Twitter abazizigidi ezingama-400, kwaye ke THETHA ngemodeli yengeniso esebenzayo.” Kodwa xa kuziwa kwinto eniyenzayo, eyona nto iphambili kukuba kufuneka ubonelele ngokuqonda, okuvuselela ukuqonda rhoqo. Kwaye (idrum roll) kufuneka, kufuneka unxibelelane nabaphulaphuli, ngokugqabaza, kwimisitho, kuyo yonke indawo. Ngokwenyani, kwiimeko ezininzi amagqabantshintshi endiwafundayo ahlala enezinto ezintle kuwo. Esi sisiqalekiso kunye nentsikelelo yehlelo njengokwenyani yelifa lethu.